Zimbaboe: Fanontaniana Mikasika Ny Fitsaràna sy ny Fanoherana Tsy Tonga Hatramin’ny Farany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Novambra 2017 10:48 GMT
I Morgan Tsvangirai, fa tsy i Robert Mugabe, no nanjary sary vongana tena nampitaintaina indrindra nanamarika ny loza izay Zimbaboe. Tahaka ny firenena tanora izay feno fanantenana sy fahaizamanao toa tsy manam-petra tamin'ny fiandohan'ny taona 90, dia nipoitra i Tsvangirai, ho toy ny hery lehibe mananontanona ny jadon'i Mugabe tamin'ny fiafaran'ny taonjato. Lasa tranga mampahonena aty Afrika ilay firenena fantatra fahiny tamin'ny hoe “sompitr'i Afrika ” , navadik'i Tsvangirai ho tranga mampihoron-koditry ny azo atao, tokony ho atao.
Nanatanteraka tafatafa am-pahibemaso ho an'ny mpanao gazety ilay mpitarika ny mpanohitra izay miha-mitoka-monina hatrany, nilazàny fa voatosika ireo ezaka nataon'i Mugabe hifikitra eo amin'ny fitondrana. Tsy mahagaga raha tsy dia tsikaritr'ireo olon-tsotra Zimbaboeana loatra ity trangan-javatra ity, izay tamin'ny 1998 dia nandrisika ireo mpiasa hampiato ny asany ka nampikatso ny firenena. Tsy faly amin'ny toetry ny firenena ny olona sady tsy faly amin'i Tsvangirai.
Asehon'i Bev Clark ao amin'ny Kubatanablogs ny fahasorenana lalina tsapan'ireo Zimbaboeana maro tamin'ilay fanoherana tsy nahomby :
Mihevitra i Tsvangirai fa ny fifidianana no làlana mendrika ho arahana, na amin'ny 2008 na rahoviana na rahoviana. Marina, ekentsika fa ilaina havaozina ny fepetra mba hanànana fifidianana madio sy mangarahara nefa fantatsika ihany koa fa io no ho zavatra farany indrindra ho avelan'ny Mugabe atao satria io no mety ho fototry ny tsy fahombiazany.
Noho izany manana antoko politika ngeza anankiroa samy manao lalao antitra isika aty Zimbaboe. Tsy maintsy mandresy ny Zanu PF ary voaozona ho resy ny MDC- raha tsy hoe atsahatry ny MDC ny fitrandrahana an'ireo sahan'eritreritra sy hetsika efa antitra tsy mamokatra.
Fampiasàna ny fitsaràna ho toy ny fitaovana politika iray
Mandritra izany fotoana izany, David Coltart, ilay sarintsarinà minisitry ny fitsaràn'ny MDC dia nanakiana mafy ny laharam-pahamehan'ny governemanta taorian'ny namoahan'ilay mpitsara fanta-bahoaka ho fantatry ny olona tao amin'ny bilaoginy ny tsy firaharahian'ny governemanta ny fitsaràna :
Na izany aza, ny antony mampitranga ity toe-javatra mampidi-doza ity dia ny tsy firaharahian'ny fitondrana Zanu PF ny fitsarana ary manaiky fotsiny izay ataon'ny fahefam-pitsarana rehefa mtimty amin'ny tanjony. Hatramin'ny 2000, ny lalàna sy ny rafi-pitsaràna amin'ny ankapobeny dia nampisaina ho toy ny fitaovana hiadiana amin'ny mpanohitra demokratika ara-dalàna. Nenjehana tamin'ny vesatra diso ireo mpitarika ny mpanohitra, ireo mpikatroka mafàna fo sy ireo mpomba ; fitsaràna diso tahaka izany ihany koa no natao. Ahemotry ny mpitsara ireo olana politika saropady toy ny fitakiana fifidianana sy ny antontan-taratasy fangatahana ny fanafàhana ireo mpikatroka mafana fo, isan'izany ireo solombavambahoaka, izay niteraka hadisoana goavan'ny fitsaràna. Maro tamin'ireo mpitsara no nampihozongozona ny fahaleovantenany tamin'ny fandraisana sy fikarakaràna ireo toeram-piompiana matetika azo tamin'ny tsy ara-dalàna avy amin'ireo mpiompy mpivarotra.
Mbola resaka fahefam-pitsaràna ihany, ananan'ny The Bearded Man tatitra ny momba ireo mpiompy fotsy hoditra izay manao ny ezaka farany hiarovana ny taniny, amin'ny fanoherana ny fizaràna indray ny taniny eny anatrehan'ny fitsaràna. Manome ny heviny amim-pahakivina izy, ” Matokia ianareo, hataon'i Mugabe izay hahazoana antoka fa na teren'ny fitsarana hihemotra aza ny governemanta, tsy hiraharaha izany ry zareo, alainy amin'ny hery ny toeram-piompiana raha ilaina izany.”
Mpitoraka bilaogy vaovao ao amin'ny vondrona
Aza adino ny manamarika ilay bilaogy Zimbaboeana farany indrindra : Zimbaboe:Outpost of Tyranny.